Kaspersky 2010 (Kaspersky Version 9) — MYSTERY ZILLION
Kaspersky 2010 (Kaspersky Version 9)
July 2009 edited October 2009 in Antivirus & Virus
အားလုံးပဲ Kaspersky 2010 ထွက်ပါပြီ၊ သူနဲ့အတူတွသုံးလို့ရမယ် Trial Reseter လဲထွက်လာပါပြီ အလိုရှိသလိုသုံးကြပါကုန်။ :67:
၁။ Kaspersky ကိုဒေါင်လုပ် လုပ်ပါ။ (ခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဘားရှင်းမှာ KIS 9.0.0.463 ဖြစ်ပါတယ်)
၂။ Kaspersky ကို install လုပ်ပါ။
၃။ Trial License ဖြင့် Activate လုပ်ပြီး သုံးပါ။
၄။ License ကိုသက်တမ်းတိုးရန်ညွှန်ကြားချက် Notify ကို ပိတ်ရန် settings ကိုသွားပါ၊ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှ Notifications ကိုရွေးပါ၊ ပြီးလျှင် ပုံ(၄-၁) ပါအတိုင်း settings ကိုရွေးပါ Notifications Box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ပုံ(၄-၂) ပါအတိုင်း License validity period expire soon ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။
၅။ ရက်အတော်ကြာသုံးပြီး လျော့နည်းသွားသော လိုင်စင်သက်တမ်းကို ပြန်တိုးရန်အတွက် Trial Resetter ကို download လုပ်ပါ။ (ဒေါင်းလုပ်လင့်ကို အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်)
၆။ Trial License ကို reset လုပ်ရန် Settings သွားပါ၊ ဘယ်ဘက်အခြမ်းရှိ Options ကို ပုံ(၆-၁) ပါအတိုင်း ရွေးပါ၊ Enable Self-Defense အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်ပါ။
၇။ Trial Resetter ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ BOX_KTR_v2.5A.exe ကို ဖွင့်ပါ။
၈။ Box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်၊ Box ထဲမှ Trial Reset ကိုနှိပ်ပါ။
၉။ ခေတ္တ ခဏစောင့်ပါ၊ Kaspresky Activation Box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ Trial License ဖြင့် Activate လုပ်ပါ။ ရက်ကြာလာ၍ လိုင်စင်သက်တမ်းလျော့နည်းလာပါက အဆင့် ၆ မှ ၉ အထိပြန်လုပ်၍ သက်တမ်းကိုတိုးခြင်းဖြင့် Kaspresky 2010 ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ Activate လုပ်ရာတွင် အင်တာနက်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
သတိ။ ။ ဖိုင်ကို Kaspersky က Hacking Tool (HackTool.Win32.Kiser.be) ဟုသတ်မှတ်၍ ဖျက်ပါလိမ့်မည်။ ဖိုင်ကို Thread and Exclusions >> Trust Zone ထဲထည့်ထားပါ။
Media Fire (ဖိုင်တွင် password မပါ)
အထက်ပါ BOX Kaspersky Trial Resetter v2.5A သည် ယခင်ဗားရှင်းများဖြစ်သော Kaspersky 8 (2009), Kaspersky7တို့နှင့်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Last Updated : 10-JULY-2009
July 2009 edited July 2009 Moderators
Yaung Sein wrote: »
................. Trial License ဖြင့် Activate လုပ်ပါ။
Trial License ကိုရှာလို့မရဘူး။ လုပ်ပါဦး။ (
I think you need to connect to the Internet to get trial license.
offline update လုပ်လို့ရလား...ရရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတာလဲ မျှကြပါအုံးး....
ကိုမင်းသားရေ ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင် လိုင်စင်လုပ်ဖို့ box ကျလာမယ်၊ အဲဒီထဲမှာ Activate Trial License ဆိုတာကို ရွေးပြီး next ကိုနှိပ်သွားရုံပါပဲ
francis wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ offline update လုပ်လို့ရပါတယ်။
၁။ အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်လေးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးရင်အဲဒီဖိုင်လေးကို zip ဖြည်ပြီး Memory Stick ဒါမှမဟုတ် Removable Media တခုခုထဲထည့်ပါ။ (free space 200MB လောက်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်)
၃။ အဲဒီRemovable Media ကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိသော ကွန်ပျူတာမှာတပ်ပါ။
၅။ update.bat ကို run ပါ။ command box ပေါ်လာပါမည်။ အဲဒီ box အလိုအလျှောက်ပျောက်သွားသည်အထိ စောင့်ပါ။ (update file size ပေါမူတည်၍ ကြာချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်)
၆။ command box ပျောက်သွားလျှင် iupdater.txt ကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ Retranslation successful and update is not requested ဟုပါလျှင် update ပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။ အခြား အကြောင်းအရာများဖော်ပြထားလျှင်ပြန်၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရပါမည်။ ဖော်ပြသည်ကိုသေချာစွာဖတ်ကြည့်ပါ။
Update လုပ်ရာတွင် ပထမအကြိမ်တွင်အချိန်ကြာပါသည်။ နောက်ပိုင်းပုံမှန်လုပ်ပေးလျှင်ပထမဆုံးအကြိမ်လို ကြာတော့မည်မဟုတ်ပါ လွယ်ကူစွာ update ကိုရရှိပါလိမ့်မည်။
MPT အသုံးပြုသူတွေကတော့ IE တွင် proxy setting မှန်ဖို့လိုပါသည်။
Kaspersky 2010 Updater
Kaspersky 2010 Updater ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးသော ကိုDivinity ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ.စက်တွေမှာသုံးရင် blacklist မဖြစ်သွား၀ူးလား အစ်ကို :39::39::39:
blackmailer23 wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ blacklist လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ အာမခံပါတယ်။ အဲဒီ Trial License က Kaspersky Lab ကနေပြီး တရားဝင်ချပေးထားတာပါခင်ဗျာ။ ဟီး.... တရားဝင်အပိုင်စီးထားတာပေါ့ဗျာ :D:P
[FONT=&quot]Kaspersky 2010 တွင်ပါဝင်လာသည့် အချို့သောအသုံးတည့်နိုင်မည့် feature အချို့ဖြစ်ပါသည်။ မသိသေးသူများ Kaspersky ကိုထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။[/FONT]
My Security Zone[/FONT]
[FONT=&quot]၁။ Application Control[/FONT]
[FONT=&quot] Application တခုခုကိုအသုံးပြုရာတွင် အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော အခြေအနေရှိပါကကာကွယ်နိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။ မိမိ၏ကိုပိုင် မှတ်တမ်း၊ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုတိုင် လိုအပ်သလိုထိမ်းချုပ်နိုင်သည်။[/FONT]
၂။ Digital Identity Protecton[/FONT]
[FONT=&quot] ကိုပိုင် မှတ်တမ်း၊ အချက်အလက်များ အသုံးချနိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။[/FONT]
၃။ Safe Run[/FONT]
[FONT=&quot] Application များကို virtual machine ပုံစံမျိုးနှင့် run ပေးသည်။ ဒီ Tool သည် Application ကို ပြင်ပ program များနှင့်အဆက်အစပ် မရှိစေပဲ သီးခြား environment တခုကိုဖန်တီးပေးသည်။ လုံခြုံမှုမရှိသည့် website များ application များကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုရာတွင်သင့်လျှော်သည်။[/FONT]
[FONT=&quot]၁။ Virtual Keyboard[/FONT]
[FONT=&quot] ကီးလော့ဂါများ ရန်မှကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ Web browser ၏ Toolbar တွင် ကီးဘုတ် icon လေးပါရှိသည်။ အလွယ်တကူ အသင့်သုံးနိုင်သည်။[/FONT]
[FONT=&quot]၂။ Parental Control[/FONT]
[FONT=&quot] ကလေးသူငယ်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူများ Internet အသုံးပြုရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တကိုချွတ်ယွင်းစေသော၊ တွေးအခေါ်နှင့်အမူအကျင့်ကိုပျက်စီးစေသော၊ အချိန်ကိုပြုန်းတီးစေသော အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်သွယ်မှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရန်အသုံးပြုရသော အရာဖြစ်သည်။[/FONT]
[FONT=&quot]၃။ Rescuse Disk[/FONT]
[FONT=&quot] မိမိကွန်ပျူတာ virus အန္တရယ်ကျရောက်နေလျှင် ပြုပြင်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖန်တီးထားသောဓါတ်ပြား ဖြစ်သည်။ Linux ပေါ်အခြေခံ၍ရေးဆွဲထားသည်။ x86 စံနစ်နှင့် အလားတူသောစံနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။[/FONT]
[FONT=&quot]၄။ Erase Your Activities History[/FONT]
[FONT=&quot] မိမိနှင့်ပတ်သက်သည့် PC အသုံးပြုမှု၊ website အသုံးပြုမှတ်တမ်း၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ကိုအားလုံး ဖျက်ဆီးပြစ်ရန်အသုံးပြုသည်။[/FONT]
[FONT=&quot]ကျွန်တော့အထင် Safe Run feature လေးကတော့ တော်တော်ကိုအသုံးတည့်မယ် feature ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Rescue Disk ဓါတ်ပြားလေးလဲကောင်းတယ်ထင်တယ်။
Removable Disk ကိုတပ်လိုက်တာနဲ့ scan လုပ်ဖို့ ပေါ်လာတာလေးကလဲ လွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်။
အသုံးတည့်မယ့် feature လေးတွေရှိရင်၊ တွေ့ခဲ့ရင်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး။ အားနည်းချက်ရှိတာ၊ မကောင်တာတွေရှိရင်လဲ ဝင်ပြောပေးပါဦး။ :D:D
တခါတလေ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာမှာ virus ကိုက်လို့ ပြန်မတက်တာမျိုး၊ Windows ထဲမှာသတ်မရတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲဒီအတွက် Kasprersky Rescuse Disk ကိုသုံးပြီး အပြတ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ Ethernet LAN card နဲ့ချိပ်ထားရင် အင်တာနက်နဲ့ တိုက်ရိုက် update လုပ်လို့ရသေးတယ်။
အဲတခုတော့ရှိတယ် Offline update လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Kaspersky7အတွက် update ဖိုင်တွေနဲ့တော့မရဘူး။ Kaspersky 8 (2009) ဒါမှမဟုတ် Kaspersky9(2010) အဲဒီအတွက် update နဲ့မှရတယ်။
Linux OS ဖြစ်နေတော့ Linux သုံးနေကြသူတွေကတော့ အကြိုက်တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။ Linux သုံနေကျသူမဟုတ်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ Interface ကအလွန် ရိုးရှင်းပါတယ်။
July 2009 edited July 2009 Administrators
အဲဒီ file (or) files တွေကို CD ထဲထည့် Burn ရင်ရပြီလား Bro ?
ဟုတ်တယ် ကိုအလက်စန်းဒရား။ CD နဲ့ကူးရုံပဲ။ အဲဒါ iso image ဖိုင်လေ။ bootable CD ပါ။ Nero Burn နဲ့ဆိုရင် double click နှိပ်တာနဲ့ CD Burn ဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ် အဆင်သင့်ကူးရုံပဲ bro။
kaspersky antivirus 2010 ကောဘယ်ကရနိုင်မလဲ။သိသောသူရှိရင်ပြောပေးကြပါအုံး။
garhtar wrote: »
Kaspersky Antivirus 2010 (9.0.0.463)
Activation Error - Unable to connect server တဲ့... အင်တာနက်လဲ ရရဲ့နဲ့ :((
ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပါ၊ ရပါတယ်ဗျ။ နက်ဝပ်ကို Disable လုပ် ပြီးရင် Enable လုပ် ပြီးရင်ပြန်စမ်းကြည့်ဗျာ။ အိုကေပါတယ်။
Internet connection ကောင်းရဲ့သားနဲ့ update လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
error connecting ပဲပြနေတယ်
ပြီးတော့ ၀ယ်ခိုင်းနေတယ် ။
MPT ADSL (203.81.72.200) kasper မှာကော ၊ IE မှာကော ပြောင်းထားပါတယ်။
Activate မလုပ်ရသေးလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ပါဦး။ တခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ တခြား MPT သုံးတဲ့သူတယောက်ကလဲ activate လုပ်မရဘူးလို့ပြောဖူးတယ်။ Proxy ကို support မလုပ်တာလားမသိဘူး။:106:
KIS 2010 Updater ကူညီကြပါဦး
yanlin wrote: »
Kaspersky မတင်ခင် တခြား antivirus တွေကိုဖြုတ်ခိုင်းတာပါ.. Avira Antivirus program ကို uninstall လုပ်ခိုင်းတာပါ .. တကယ်လို့ uninstall လုပ်ပြီးသားမှာအဲလိုပေါ်တယ်ဆိုရင် .. uninstall ကို complete ဖြစ်အောင်မလုပ်လို့ပါ.. အဆင်ပြေပါစေ ..
Download ဆွဲပြီးတော့ ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ ။ အကိုပြောသလို Linux သုံးတာတော့မဟုတ်ဘူး.........
.iso က CD image ဖိုင်ပါ bootable ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို Nero လိုမျိုး CD Burning software တခုခုနဲ့ burn လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ CD နဲ့ boot တက်ပြီး စက်ကို virus scan စစ်ဖို့ပါ။
trial version ဆိုတော့ feature အားလုံးသုံးလို့ရပါ့ မလားမသိ။ ပြောပေးပါအုံး။ စမ်းသုံးကြည့်မလို့ပါ။ အခုတော့ avira free version သုံးနေပါတယ်။ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလည်းမသိ.... :P
ကိုသိချင် သိချင်တာကို သိအောင်ပြောမယ်ဗျာ။:D Kaspersky Trial Version မှာ feature အားလုံးပါပါတယ်။
Kaspersky ကတော့ ဒီမှာအသုံးအများဆုံးပဲ။ avira ကိုတော့ ဘယ်လိုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာတော့သိတယ် :P
ကိုသိချင် သိလိုသမျှကို သိသလောက် အသိပေးလိုက်ပါကြောင်း။
Kaspersky အတွက်ဆို MZ မှာ အားကိုးရတဲ့ အိုပါ့ ကိုကြီး Yaung Sein ရေ :Dလင့်လေးပြန်စစ်ပေးပါအုံး ကျွန်တော် ဒေါင်းတာ 404 နဲ့ ညားနေလို့ ပါ
winaingso wrote: »
mhu4g-d9yx6-mp5aj-quqzj 6လစာပါ တရုတ်version နဲ့ မှရပါတယ် တရုတ်စာတတ်ရင်သုံးကြပါ online activation codeပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ကျတော့ စက်မှာ သွင်းထားတာက KIS 2010 ver 9.0.0.710 ပါ။
ကျတော် trial resetter ကိုလည်း မသုံးချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျတော် KIS ကီးနောက်ဆုံးထွက်တွေကို ဒေါင်းထားပါတယ်။ အဲဒီကီးတွေကို သွင်းတာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရက်၃၀ ကလည်း ပြည့်တော့မယ်ဗျာ။
ကျတော် ကီးတွေကို activate လုပ်နည်းကတော့ အရင်ဆုံး အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ bad ဖြစ်တဲ့ 44UEA-CYRAJ-NMAV3-YXX4V ကို သွင်းပါတယ်။ အဲရာလို့ ပေါ်လာပြီး ဝင်းဒိုး အသစ်တစ်ခု တက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှာ Browse ကို ရွေးပြီး ကီး အသစ်ကို သွင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဗျာ အောက်က ပုံလိုပဲ ပေါ်လာတယ်ဗျာ။
ကျတော် ဘာမှားသလဲ ပြောပြပေးပါအုံးခင်ဗျား
puluque wrote: »
ဒါလေးစမ်းကြည့်ပါဦး ကိုပုလုကွေး ခင်ဗျာ..
16 October KIS keys
ဒါနဲ့ AUTO CAD လေးပြန်ရေးပါဦးလား အစ်ကို အစ်ကို့ဆီကသင်ယူချင်သေးလို့ပါ....
ဖြစ်နိုင်ရင် ဂျီမေးလေးပါလိုချင်ပါတယ် ဗျာ ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုပါ .....
ကျေးဇူးပါ ကိုကြီးယောင် boot cd burn ဖို့တိုင်ပတ်နေတာကြာနေပြီ ဒါလေးဖတ်ပြီးစမ်းလိုက်မှအဆင်ပြေသွားတယ် အ၇င်က CD ROM (bootabel )နဲ့ ဘန်းတာ 6ခွေလောက်မြောသွားတယ် ဟီးးးးးးအဲလောက်တော်တာ iso image file ကြိးပဲထွက်ထွက်လာတာ